Ipolisi Yemeko Ongenakuyinceda - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Qaphela: Eli nqaku alithethi ngeemeko ezinento yokwenza nobhubhane oyi-coronavirus (COVID-19). Hlola inqaku lethu elithetha ngeemeko ongenakuzinceda zeCOVID-19 ukuze ufunde ngeemeko ezinento yokwenza neCOVID-19, ingakumbi imali ebuyiswayo nengabuyiswayo ngokubhukisha okwenziwe emva kwe-14 kaMatshi 2020.
Usuku eza kuqalisa ukusebenza ngalo: 20 Januwari 2021
Le Polisi Yemeko Ongenakuyinceda icacisa indlela ekurhoxiswa ngayo xa kuvela iimeko ezingalindelekanga ezingapha kwamandla akho emva kokubhukisha zibe zisenza kungakwazeki okanye ibe kukophula umthetho ukugqiba ukubhukisha kwakho. Le Polisi isebenza xa kubhukishwe indawo okanye Into Enokonwatyelwa.
Xa le Polisi ikuvumela ukurhoxisa, ilawula ize isebenze endaweni yepolisi yokurhoxa yoko kubhukisha. Iindwendwe ezichaphazelwe yimeko equkiweyo kule Polisi zinokurhoxisa ukubhukisha kwazo zize, kuxhomekeka kwimeko, zibuyiselwe imali, zifumane isaphulelo ezinokusisebenzisa kuhambo okanye enye into. Ababuki zindwendwe abachaphazelwe yimeko equkiweyo kule Polisi banokurhoxisa ngaphandle kwezohlwayo eziqatha, kodwa kuxhomekeka kwiimeko, iikhalenda zabo zisenokuvalwa ngezo ntsuku zokubhukisha okurhoxisiweyo.
Le Polisi isebenzisa igama elithi “Imeko” xa ibhekisela kwezi meko zilandelayo ezenzeka emva kokubhukisha, ebezingalindelekanga ngoku bekubhukishwa nezenza ungakwazi ukuhamba okanye kungabikho semthethweni ukuhamba.
Izinto ezitshintshileyo kwizinto ezifunwa ngurhulumente kuhambo. Ukutshintshwa ngesiquphe kwezinto ezifunekayo ukuze ube ne-visa okanye ipaspoti okwenziwe liziko likarhulumente okunqanda ukuba kuyiwe kwindawo ebekuza kuyiwa kuyo. Le nto ayiquki amaxwebhu okuhamba alahlekileyo okanye aphelelweyo okanye ezinye iimeko zobuqu ezinento yokwenza nokuvumeleka kondwendwe ukuba luhambe.
Iimeko zongxamiseko okanye izifo ezigqugqisileyo ekuhlaleni ezichaziweyo. Iimeko zongxamiseko zasekuhlaleni okanye zelizwe, izifo ezigqugqisileyo ekuhlaleni, oobhubhane, neemeko zempilo yoluntu ezingxamisekileyo ezichazwe ngurhulumente. Le nto ayiziquki izigulo eziqhele ukubakho okanye ngokuqhelekileyo ezidityaniswa nengingqi ethile—ngokomzekelo, imalariya eThailand okanye i-dengue fever eHawaii.
Imiqathango yohambo karhulumente. Imiqathango yohambo emiselwe liziko likarhulumente enqanda ukuya, ukuhlala okanye ukubuya kwindawo ekuyo Indlu. Le nto ayiquki amacebiso ohambo anganyanzelekanga okanye izikhokelo zikarhulumente ezifana nawo.
Ukulwa komkhosi okanye olunye uhlobo lokulwa. Iimfazwe, ukulwa, ukuvingcelwa, imfazwe yasekuhlaleni, ubugrogrisi, ukudubula, iibhombhu, ukuvukela, iitoyi-toyi, ukubhukuqwa, nokungalawuleki kwabantu.
Iintlekele zemvelo. Iintlekele zemvelo, izenzo zikaThixo, ukungabikho kweenkonzo ezibalulekileyo okungacetywanga okuphazamisa abantu abaninzi kangangexesha elide, ukudubula kwentaba-mlilo, ii-tsunami nezinye iimeko zemozulu egqithiseleyo nengaqhelekanga. Le nto ayiquki iimeko zemozulu nezemvelo eziqhelekileyo kangangokuba zinokulindelwa kuloo ndawo —ngokomzekelo, iinkanyamba ezenzeka ngexesha leenkanyamba eFlorida.
Zonke ezinye. Le Polisi ivumela kuphela ukurhoxisa Kwiimeko ezichazwe ngasentla. Zonke ezinye aziqukwanga. Imizekelo yeemeko le Polisi engavumeli ukurhoxisa phantsi kwazo iquka: isigulo, ukugula okanye ukwenzakala ebezingalindelekanga; izinto ezigunyaziswe ngurhulumente ezifana nomsebenzi wokugweba, ukuvela enkundleni okanye ukuthunyelwa emkhosini; amacebiso ngohambo okanye ezinye izikhokelo zikarhulumente (ezingezizo ukuphelisa okanye ukubeka imiqathango kuhambo); ukurhoxiswa okanye ukutshintshwa kosuku lomcimbi ububhukishelwe; kunye nokuphazamiseka kwezothutho okungenanto yakwenza Nemeko equkiweyo njengokuvalwa kweendlela kunye nokurhoxiswa kweenqwelo-moya, iitreyini, iibhasi okanye iinqanawa. Ukuba urhoxisa ukubhukisha kwezi meko, imali oza kuyibuyiselwa iza kuxhomekeka kwipolisi yokurhoxa esebenzayo koko kubhukisha.
Into elandelayo ekufuneka uyenze
Ukuba siye sakwazisa okanye sakhupha inkcazelo eqinisekisa ukuba le Polisi iyasebenza ekubhukisheni kwakho, nceda ulandele imiyalelo yokurhoxisa esikunika yona. Xa siye sakwazisa okanye sakhupha inkcazelo ngendlela le Polisi esebenza ngayo, ufanele ukwazi ukukhetha ukurhoxisa phantsi kwale Polisi ngokuya kwiphepha Lohambo uze urhoxise ukubhukisha okuchaphazelekileyo. Ukuba ucinga ukuba le Polisi iyasebenza ekubhukisheni kwakho, kodwa sibe singakwazisanga okanye singakhuphanga nkcazelo ngale Meko, nceda uqhakamshelane nathi ukuze urhoxise ukubhukisha kwakho. Kuzo zonke iimeko, ufanele ukulungele ukunikezela ngamaxwebhu abonisa indlela Imeko ekuchaphazele ngayo okanye echaphazele ngayo ukubhukisha kwakho.
Ukuba unemibuzo, nceda uqhakamshelane nathi.
Ezinye izinto ekufuneka uzazi
Le Polisi isebenza kuko konke ukubhukisha okunosuku lokungena olungosuku lokuqalisa ukusebenza kwayo okanye emva koko. Le Polisi ayisebenzi xa kubhukishwe iLuxe, kuba yona ingena Kwipolisi yeLuxe Engokubuyiswa Kwemali Yondwendwe.
Ndingakurhoxisa njani ukubhukisha kwam indawo yokuhlala?
Ungaya kwindawo yohambo lwakho ukuze urhoxise okanye utshintshe ukubhukisha kwakho.
Ndingakurhoxisa njani ukubhukisha njengombuki zindwendwe wendawo yokuhlala?
Ungakurhoxisa ukubhukisha, kodwa ukuba ixesha lokubhalisa xa ufika likwiiyure eziyi-24, usenokungakwazi ukukhetha ukurhoxisa kwi-intanethi.
Ukurhoxisa ngoxa usahleli
IPolisi yethu Yokubuyiselwa Kwemali Yondwendwe inokukukhusela xa indlu okanye izinto ezinokusetyenziswa zingeyiyo le nto ubuyilindele.